ဆီဂန်ဒါ Bက အသင်းကို ရှုံးခဲ့ပေမယ့် မရှက်ပါဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ ရီးရဲလ်နည်းပြ ဇီဒန်း – MyMedia Myanmar
ဆီဂန်ဒါ Bက အသင်းကို ရှုံးခဲ့ပေမယ့် မရှက်ပါဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ ရီးရဲလ်နည်းပြ ဇီဒန်း
ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ နည်းပြဖြစ်သူ ဇီဒန်းက အယ်လ်ကိုယာနို အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာက ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေ အပေါ် ရှုံ့ချသွားခဲ့ပြီးတော့ အခုလို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာ အတွက် ရှက်စရာ မလိုဘူးလို့ မီဒီယာတွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းအနေနဲ့ မနေ့ညက ဆီဂန်ဒါ B အသင်းဖြစ်တဲ့ အယ်လ်ကိုယာနို အသင်းနဲ့ ကိုပါဒယ်ရေးဖလားပွဲစဉ် အဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပြီး တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့် အချိန်ပို ဆက်လက် ကစားခဲ့ကြကာ အယ်လ်ကိုယာနို ကစားသမား ဂွမ်နန်က ပွဲကစားချိန် ၁၁၅ မိနစ်အရောက်မှာ သွင်းဂိုး ရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်တို့ အရေးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။
အဆိုပါ ပွဲစဉ်မှာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် ကစားသမား အီဒါ မီလီတာအို က ၄၅ မိနစ်မှာ အဖွင့်ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း မိနစ် ၈၀ အရောက်မှာတော့ အယ်လ်ကိုယာနို ကစားသမား ဟိုဆေး စို့ဘ်စ်က ချေပဂိုး ပြန်လည် သွင်းယူ‌ပေးခဲ့ကာ အချိန်ပိုမှာ ဂွမ်နန်ရဲ့ သွင်းဂိုးနဲ့ အနိုင်ရယူသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် နည်းပြ ဇီဒန်းကတော့ လာလီဂါချန်ပီယံ အသင်းအနေနဲ့ အခုလို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာဟာ ရှက်စရာကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေ အပေါ် ငြင်းပယ် ရှုံ့ချသွားခဲ့ပါတယ်။ “ အဲ့ဒါက ခင်ဗျားရဲ့ စကားလုံးတွေပါ။ အဲ့ဒီ စကားတွေက ကျွန်တော်နဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ ဘောလုံးပါ၊ ခက်ခဲတဲ့ အရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ စဂွန်ဒါ ဘီ က အသင်းလေးနဲ့ ကစားရတယ်၊ ပြီးတော့ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒီပွဲကို နိုင်ဖို့ လိုအပ်တယ်ပေါ့၊ ဒါပေမယ့် အဆုံးသတ်မှာ အဲ့ဒီလို ဖြစ်မလာတိုင်း ဒါက ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး ”
“ အဲ့ဒါက ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ဘောလုံးသမားဘဝမှာ တစ်ခါတစ်ရံ ဖြစ်လည် းဖြစ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ တာဝန်ယူမှုရှိဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အပြည့်အဝ တာဝန်ယူသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ထပ် နာကျင်စရာကောင်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရှုံးရတာကို မကြိုက်လို့ပါ၊ ပြီးတော့ ကစားသမားတွေ အနေနဲ့လည်း နိုင်ချင်ကြတာကြည့်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ အခု ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးတော့ မခံစားရပါဘူး၊ ဆက်တွေးပြီး ဆက်ကြိုးစားကြတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်တယ်၊ ကြိုးစားတယ် ပြီးတော့ နောက်ပိုင်းမှာ အနည်းငယ်လျော့နည်းသွားတာတောင် ကျွန်တော်တို့ ကောင်းတဲ့အရာတွေ အများကြီး လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး ကစားထားတဲ့ သုံးပွဲ၊ လေးပွဲ ကလွဲရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီရာသီမှာ ခြေစွမ်းကောင်းတွေပြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ လာလီဂါ နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အကြောင်းပဲ တွေးရတော့မယ်။ အာရုံတော့ စိုက်ထားရပါမယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုရင် အရာရာ ဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကစားသမားတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ စကားကို နားထောင်နေရဲ့လား? ခင်ဗျားအနေနဲ့ ကစားသမားတွေကို မေးကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်လည်းပဲ သူတို့ကို ယုံကြည်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီနေရာမှာ တစ်လှေထဲ စီးနေကြတာပါ ” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
The post ဆီဂန်ဒါ Bက အသင်းကို ရှုံးခဲ့ပေမယ့် မရှက်ပါဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ ရီးရဲလ်နည်းပြ ဇီဒန်း appeared first on MySport Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-21T13:31:50+06:30January 21st, 2021|MYSPORT MYANMAR|